धानको समर्थन मूल्य निर्धारण भएसँगै किसान लाभान्वित | Artha News Nepal
Home	कृषि	धानको समर्थन मूल्य निर्धारण भएसँगै किसान लाभान्वित
धानको समर्थन मूल्य निर्धारण भएसँगै किसान लाभान्वित
by अर्थन्यूज पुस २४, २०७७
विराटनगर । सरकारले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेपछि किसानले अपेक्षित लाभ लिन थालेका छन् । सरकारले समर्थन मूल्यसहित खाद्य व्यवस्था कार्यालयमार्फत धान खरीद गरिरहेको छ ।
विगतमा किसानले उत्पादन गरेको धानको बजारको समस्या थियो भने किसानले बाध्य भएर कम मूल्यमा व्यापारीलाई धान बेच्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले किसानको धान २०७४ सालबाट खरीद गर्न लागेकोले देशको ठूलो हिस्सामा रहेका किसान लाभान्वित भइरहेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिकास्थितका खाद्य व्यवस्था कार्यालयले अहिलेसम्ममा १५ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरीद गरिसकेको छ । अघिल्लो वर्ष ५४६ क्विन्टल मात्र धान खरीद गरेको सो कार्यालयले गएको वर्ष नौ हजार ३०० क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । कार्यालय शहर केन्द्रित भएको र किसानलाई शहरसम्म आउन समस्या भएकाले गएको वर्ष अपेक्षित धान खरीद नभएको बताइएको छ ।
खाद्य व्यवस्था कार्यालय विराटनगरका प्रमुख महेन्द्र सिटौलाका अनुसार सरकारले यस वर्ष धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रू. दुई हजार ८८५ निर्धारण गरेको छ । यसबाट बजार नपाउने किसानका लागि खाद्य व्यवस्था कार्यालय वरदान भएको प्रमुख सिटौलाले जानकारी दिए ।
रञ्जीत र बासमती धानसमेत खरिद गर्ने यो कार्यालयमा अहिलेसम्ममा ती जातका धान किसानले नल्याएको र पछि आउने सम्भावना पनि रहेको प्रमुख सिटौलाले बताए । यस्तै झापाको विर्तामोडस्थित रहेको खाद्य व्यवस्था कार्यालयले अहिलेसम्ममा नौ हजार ६१८ क्विन्टल सोना मन्सुली धान खरीद गरिसकेको छ ।
यस वर्ष २३ हजार क्विन्टल धान खरीद गर्ने लक्ष्य लिएको कार्यालयले सरकारको समर्थन मूल्यमै किसानको धान खरीद गरिरहेको कार्यालय प्रमुख देवेन्द्र राईले बताए । उनले गएको वर्षमा सरकारले सोना मन्सुली धानको मूल्य रू. दुई हजार ६७३ कायम गरेको थियो । गएको वर्षमा १९ हजार क्विन्टल सोना मन्सुली र पाँच हजार क्विन्टल रञ्जीत धान खरीद गरेको थियो ।
कार्यालय प्रमुख राईका अनुसार यस वर्ष बासमती धानको उत्पादन कम भएको र सम्पन्न अवस्थाका उपभोक्ता एवम् व्यापारीले किसानको खेतमै गएर धान खरीद गर्ने र मूल्य पनि बढी दिने भएकाले बासमती धान अहिलेसम्ममा नआएको जानकारी दिए ।
आज १७.३१ अंकले नेप्से बढ्दा ६ अर्ब ३१ करोडभन्दा बढीको शेयर कारोबार
सोमवार सुनको भाउमा सामान्य गिरावट, चाँदीको मूल्य स्थिर